ကား ထုတ်လုပ်သူ Hamma Technology သည် လောင်စာဆီ များ ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်း မည် - Pandaily
ကား ထုတ်လုပ်သူ Hamma Technology သည် လောင်စာဆီ များ ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်း မည်
Jun 16, 2022, 11:41မနက် 2022/06/16 14:11:07 Pandaily
Geely Commercial Vehicle Group ၏လက် အောက်ခံ Hamma Technology က၂၀ ၂၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွစ၍ ႐ိုးရာ ေလာင္စာ သုံး ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္တန္႔သန့်ရှင်းသော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များ၊ မက် သနော စွမ်းအင်၊ ဟိုက် ဘရစ် ကား များနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် လောင်စာ ဆဲလ် များအပါအ ၀ င် သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင် အစားထိုး အသစ်များ ကိုအာရုံစိုက် ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ Hamma Technology သည် BYD နှင့် Long March ပြီးလျှင် တတိယမြောက် တရုတ် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာ လိမ့်မည်။
“Hanma Technology က ေလာင္စာ ဆီ သယ္ ယာဥ္ ေတြ ရပ္ဆိုင္း မယ့္ အခ်ိန္ ဇယား ကို ေၾကညာ လိုက္တာဟာ Geely Commercial Vehicle နဲ႔ Hanma Technology ကို ေပါင္းစပ္ လိုက္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ Hanma ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အဆင့္ သစ္ တစ္ခုကို ေရာက္ ေနၿပီ ဆိုတာကို ျပသ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Geely Commercial
တရုတ်နိုင်ငံ ပြင်ပ ရှိ စျေးကွက် များတွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် နှင့် ကုမ္ပဏီ အမည် တစ်ခုအနေဖြင့် Hamma Technology သည် CAMC အမည် ကိုအသုံးပြုသည်။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် သမိုင်းကြောင်း ရှိသည့် လွတ်လပ်သော စီးပွားဖြစ် မော်တော်ယာဉ် အမှတ်တံဆိပ် အနေဖြင့် Hanma Technology သည် စွမ်းအင် ကဏ္ new သစ် တွင် ကြာမြင့်စွာ ကတည်းက စီစဉ် ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် Hamma Technology သည် စွမ်းအင် လေးလံသော ထရပ်ကား အသစ်များ ကိုစတင် စမ်းသပ် ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သုတေသန စီမံကိန်း ကိုစတင်ခဲ့သည်။
2016 ခုနှစ်တွင် Hanma အောင်မြင်စွာ လွတ်လပ်သော R & D ကို မှတဆင့် စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ် မိုးသည်းထန်စွာ ထရပ်ကား ဒီဇိုင်း တစ်ခု R & D အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ခဲ့, အသစ် စွမ်းအင် မိုးသည်းထန်စွာ ထရပ်ကား ၏ လယ်ပြင် ထဲ သို့ဝင် တရုတ် အတွက် အစောဆုံး စီးပွားဖြစ် မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီ တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Hamma သည် တရုတ်ပြည် တွင်ပထမဆုံး လျှပ်စစ် လယ် ထွန်စက် ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီ မှမ ေလ အထိ Hamma Technology သည် NEV ၁, ၁၇၇ စီး ရောင်းချ ခဲ့ပြီးထို ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ စုစုပေါင်း ရောင်းအား ၏ ၄၁. ၂၃% ရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့် လယ် ထွန်စက် များ၊ ရောနှော ကုန်တင်ကား များနှင့် အမှိုက် ပုံ ထရပ်ကား များပါ ၀ င်သည့် လျှပ်စစ် လေးလံသော ထရပ်ကား များသည် Hanma Technology မှ အထူးပြု ထားသော စွမ်းအင် ထုတ်ကုန် အသစ်များ ဖြစ်လာသည်။
ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိ သူတစ် ဦး က ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၌ စွမ်းအင် လေးလံသော ထရပ်ကား အသစ်များ ၏စုစုပေါင်း ရောင်းအား သည် ၂၅၀၀၀ ခန့် အထိ နှစ် ဆတိုး မည်ဟု ခန့်မှန်း ခဲ့သည်။
China Commercial Vehicle Distribution Association မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Zhong Weiping က “စွမ်းအင် လေးလံသော ထရပ်ကား အသစ် များ၏ လူကြိုက်များ မှုသည် လျင်မြန်စွာ မြင့်တက် နေသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Zhong က ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်း မူဝါဒ များသည် စွမ်းအင် လေးလံသော ထရပ်ကား အသစ် များအတွက် စျေးကွက် ၀ ယ်လိုအား ကိုဆက်လက် လှုံ့ဆော် ပေး လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀ ၂၂ သည် ဒေသန္တရ အစိုးရ များအတွက် “ကာဗွန် အမြင့်ဆုံး ၊ ကာဗွန် ကြားနေ ရေး ရည်မှန်းချက်များ” နှင့် NEVS ထောက်ပံ့ငွေ များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် နောက်ဆုံး နှစ်ဖြစ်သည်။ ဤ ကောင်းမွန်သော မူဝါဒ များသည် စွမ်းအင် လေးလံသော ထရပ်ကား အသစ်များကို အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ ရောင်းချ ခြင်းကို မြှင့်တင် နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Geely ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယာဉ် သည် စာရင်းပြုစု ရန်ပြင်ဆင် နေသည်
ဇန်နဝါရီ မှ မေ လအထိ တရုတ်နိုင်ငံ ၏စွမ်းအင် လေးလံသော ထရပ်ကား အသစ် ၇, ၆ ၇၇ စီး ရောင်းချခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် Hanma သည် ကုန်တင်ကား ၉ ၁၃ စီးကို ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂ ၀၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာပြီး စျေးကွက် ဝေစု ၁၁. ၈၉% ရှိသည်။ XCMG Construction Machinery နှင့် Sany Group တို့ ပြီးလျှင် ဒုတိယ နေရာတွင် ရှိပြီး စက်မှု လုပ်ငန်းတွင် တတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။